Gulabo Sitabo (2020) | MM Movie Store
Gulabo Sitabo ဇာကျကားကတော့ Comedy/Drama ဇာကျကားအမြိုးအစားဖွဈပွီးIMDB rating 6.7ရရှိထားတဲ့ဇာတျကားဖွဈပါတယျ။Hindi သရုပျဆောငျတှမှောနာမညျကွီးမငျးသားဟောငျးတဈယောကျဖွဈတဲ့အမီတာဘဂမျြးကိုယျတိုငျပါဝငျရိုကျကူးထားပါတယျ။
ဇာတျလမျးအကဉျြးမိရျဇာဆိုတဲ့အဖိုးကွီးနဲ့ဘဂေမျဆိုတဲ့သူ့မိနျးမဟာဖာတီမာနနျးတျောလို့ချေါတဲ့ အိမျဟောငျးကွီးတဈလုံးပိုငျကွပါတယျ။အိမျကွီးမှာအိမျငှါးအဖွဈနကေတဲ့သူတှအေမြားကွီးရှိပါတယျ။မိရျဇာဟာသူ့မိနျးမဘဂေမျထကျအသကျ ၁၇နှဈငယျပါတယျ။
အိမျရှငျနဲ့အိမျငှါးတှပွေဿနာအကွားအာကျောလျောဂြီသုတသေနလုပျတဲ့ သူတဈယောကျရောကျလာပွီးအိမျကွီးကိုနိုငျငံအမှအေနှဈအဖွဈသိမျးဖို့ကွံစညျပါတော့တယျ။မိရျဇာကွီးတဈယာကျ သူပိုငျခငျြတဲ့အိမျကွီးကိုပိုငျဆိုငျနိုငျပါ့မလား…?
အိမျငှါးတှကေရောအိမျပျေါကမောငျးခခြံရမှာလား……?ဒီဇာတျကားကတော့ လူတှရေဲ့ အတ်တနဲ့ လောဘတှကေို ဟာသလေးတှနှေောရငျး ပညာသားပါပါပွသပေးတဲ့ ကားကောငျးမို့ ခံစားကွညျ့ကွပါဦး….
Gulabo Sitabo ဇာက်ကားကတော့ Comedy/Drama ဇာက်ကားအမျိုးအစားဖြစ်ပြီးIMDB rating 6.7ရရှိထားတဲ့ဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်။Hindi သရုပ်ဆောင်တွေမှာနာမည်ကြီးမင်းသားဟောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အမီတာဘဂျမ်းကိုယ်တိုင်ပါဝင်ရိုက်ကူးထားပါတယ်။
ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းမိရ်ဇာဆိုတဲ့အဖိုးကြီးနဲ့ဘေဂမ်ဆိုတဲ့သူ့မိန်းမဟာဖာတီမာနန်းတော်လို့ခေါ်တဲ့ အိမ်ဟောင်းကြီးတစ်လုံးပိုင်ကြပါတယ်။အိမ်ကြီးမှာအိမ်ငှါးအဖြစ်နေကတဲ့သူတွေအများကြီးရှိပါတယ်။မိရ်ဇာဟာသူ့မိန်းမဘေဂမ်ထက်အသက် ၁၇နှစ်ငယ်ပါတယ်။
အိမ်ရှင်နဲ့အိမ်ငှါးတွေပြဿနာအကြားအာကော်လော်ဂျီသုတေသနလုပ်တဲ့ သူတစ်ယောက်ရောက်လာပြီးအိမ်ကြီးကိုနိုင်ငံအမွေအနှစ်အဖြစ်သိမ်းဖို့ကြံစည်ပါတော့တယ်။မိရ်ဇာကြီးတစ်ယာက် သူပိုင်ချင်တဲ့အိမ်ကြီးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါ့မလား…?
အိမ်ငှါးတွေကရောအိမ်ပေါ်ကမောင်းချခံရမှာလား……?ဒီဇာတ်ကားကတော့ လူတွေရဲ့ အတ္တနဲ့ လောဘတွေကို ဟာသလေးတွေနှောရင်း ပညာသားပါပါပြသပေးတဲ့ ကားကောင်းမို့ ခံစားကြည့်ကြပါဦး….
The Good Doctor (Season 3) ၊ အပိုငျး (၁၂)